DOORASHOOYINKU DHIB IYO DHEEFBA WAA U LEEYIHIIN SHACBKA SOMALILAND QAYBTII 6AAD | Toggaherer's Blog
« JAWAAB MAQAALKII HASHU MAANKAYGA GADEE MA MASAAR AYAAY LIQDAY
MUXUU GALABSADAY DR GABOOSE OO AAN AHAYN HAYBTIISA »
DOORASHOOYINKU DHIB IYO DHEEFBA WAA U LEEYIHIIN SHACBKA SOMALILAND QAYBTII 6AAD
Doorshooyinku dhib iyo dheefba waa u leeyihiin Shacabka Somaliland
(Diiwaan gelintu waxay hayd in Doorasho xaq iyo xalaal ah inoo horseedo balse may ahay in ay muran iyo buuq badan inagu abuurto,cidii mar kasta doonaysay in Diiwaan gelin la sameeyaana waxay ahayd Mucaaradka)
Mar kasta waxaad ogaataan in howlaha Doorashooyinku ay yihiin howlo aad iyo aad u dhib badan,marka laga hadlayo qarasha ku baxaya iyo howsha la qabanayo lafteeda,waxaad markasta maskaxda ku haysaa Doorashooyin ka dhacay wadan yar oo aan AQOONSANSI dhaqaale iyo mid siyaasadeedba helin ,kuna yaala Qaarada Afrika sida ay ugu dhib badan tahay howshaasi.Waxaa iyana muhiim ah in aad ogaato in Doorashooyinkii Somaliland hore u soo maray,aan wax dhibaato ahi ka dhicin,kuwa soo socdana sidaas oo kale ayaan u rajaynayaa reer Somaliland.
Ujeedooyinkii laga lahaa Diiwan gelinta,sida ila tahay waxaa ugu muhiimsanaa dhowr arimood oo ay ka mid yihiin:-
1. In la helo tiro koobka rasmiga ah ee shacabka reer Somaliland.Waxaan ula jeedaa in la tiro kobo shacabka reer Somaliland ee weli lagu muran san yahay tiradooda.
2. In qof kasta oo reer Somaliland ah uu helo waraaqda aqoonsiga (ID card),taas oo cadayn fiican u ah dhalasho ahaan – deegaan ahaanba iyo nabadgelyo ahaanba.
3. In la kala saaro cida reer Somaliland u dhalatay iyo cida aan u dhalan amase ahayn reer Somaliland.
4. In la helo Doorasho XAQ iyo XALAAL ah ,si loo yareeyo muranka mar marka qaarkood ka dhasha codeynta Doorashooyinka Somaliland.Waxaan ula jeedaa waxay ahayd in Diiwaan gelinta ay fududeyso qabsoomida Doorashooyinka,mucaarid iyo mucaafidna lagu wada qanacsan yahay.
Ma garanayo wax ujeedo intaa dhaafsan oo laga lahaa Diwaan gelintii ka dhacday Somaliland dhowaan,balse waa wax dhici kara in ay jiraan urruro amase shaqsiyaad ka lahaa dano ka duwan kuwaas aan kor ku soo sheegay,haddii ay jiraana waa khaldan yihiin.
May hayn in Diiwaan gelintu inoo horseedo arimo badan oo maanta murankooda iyo buuqoodu soo muuqdaan ,soona badan doonaan xilli aan sidaa u sii fogayn, waana arimaha sababta u ah in Doorashooyinkii Somaliland dib u dhac ku yimaado.
May ahayn in Diiwaan gelintu dib u dhac ku keento Doorashooyinka,balse waxay hayd in fuduyso qabsoomida doorashooyinka.
1. May ahayn in Diiwaangelinta muran inoo horseedo,balse waxay ahayd in ay Diiwaan gelinta yareyso amase ay xal u noqoto muran kasta oo laga filayo in uu ka yimaado Doorashooyinka soo socda.
2. May hayn in Diiwaan gelintu abuurto muran Goboleed iyo mid Qabiilba balse waxay hayd in aynu ku kala ogaano bal sida tirada shacabku ugu kala badan tahay deeganada ,marka laga hadlayo adeega bulsho ee shacabku u baahan yahay.
3. Si kasta ha ahaatee Diiwan gelintu waa in ay noqotaa tii inoo horseedi lahayd Doorasho nabadeed ee waa in aanay noqon mid inoo horseeda dhibaato iyo muran.
4. May ahayn in sirta diiwaan gelinta ay ogaadaan shacabka caadiga ah,balse waxay hayd in arimaha Diiwan gelinta ay la socdaan oo keliya cida masuuliyada iska leh oo keliya .
Hadal iyo dhamaan qof kasta oo reer Somaliland ah Siyaasi iyo shicib-ba waxaa ina saaran masuuliyad aad u weyn ,oo ah in aynu ilaalino xilna iska saarno sidii ay inoogu qabsoomi lahaayeen Doorashooyin xaq – xalaal iyo nabad gelyo ah.
Waar hooy nabada iyo horumarku aynu maanta haysanaa waa wax aad iyo aad u qaali ah ,howl badanina inaga soo martay ee yaan lagu ciyaarin.
Haddii aad u baahan tahay faahfaahin ku saabsan Diiwaan gelinta fadlan akhriso Xeerka Diiwaan gelinta ee hore loo ansaxiyey.
–La soco qaybtahaba dambe iyo Xanuunka Doorshooyinka ee xilligan ka jira Somaliland —
This entry was posted on April 16, 2009 at 5:03 am and is filed under 1.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.